6 အဘို့ရလဒ် mixels games
ပန်းခြံအားဖြင့်သင်တို့၏စကိတ်စီးစီး။ သင်တို့ရှိသမျှသည် parcours အောင်နိုင်နိုင်ပါသလား? ဒါဟာလွယ်ကူသည်ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ထင်ထက်ခက်ခဲ၏!
မြို့ကိုဝိုင်းထား td အောက်မှာမြို့
Coaster ပြိုင်ကားသမား 2
တစ်ကြိတ်စက် Coaster အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အပေါ်တစ်ဦးကားမောင်းနှင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ယှဉ်ပြိုင်ငြင်း။ နှုတ်ဆက်လို့ပြောဖို့လမ်းကြောင်းနှင့်အပုဒ်ထားခဲ့ဖို့မဘီးမှာအများကြီးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့စွမ်းရည်ကိုပြပါ။ ဝင်းနှင့်ကြီးစွာသောချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မည်။
အရာ gumball မိဿဟာယ
ထိုအမှုအရာများ Fellowship အတွက် Gumball ရဲ့မော်ကွန်း RPG ရှာပုံတော် Join! အ Watterson အိမ်သူအိမ်သား dangerproof ရန်အားထုတ်မှုအတွက်, ဂရမ် Jojo ကလေးတွေကို '' ပစ္စည်းပစ္စယ ယူ. Elmore ၏အန္တရာယ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာကွာဝှက်ထား၏။ စစ်တိုက် ghos မှ Gumball, ဒါဝင်နှင့် Anais အဖြစ်ရေးအဖွဲ့တက်
ဖုတ်ကောင်ရှိသမျှကို Mario ပြည်ကိုအုပ်စိုးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတွင်းလူတိုင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း။ နောက်တကြိမ်, Mario ကယ်ဆယ်ရေးအားမိမိစက်သေနတ်ထရပ်ကားမောင်းသည်။ Mario ကယ်ဆယ်ရေးဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှသောဖုတ်ကောင်ပစ်သတ်, သတ်ကိုကူညီပါ။
mr bean ကိုလေထီးခုန်
မစ္စတာ Bean ကိုအသစ်တစ်ခုခုကိုစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းကင်ယံမှပျံခဲ့သည်။ သူ့ကိုအဖြစ်ဝေးသင်တတ်နိုင်သလောက်ပျံသန်းကိုကူညီပါ။ ထိုအကြံပြုချက်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
စစ်တိုက်ခြင်းငှါမြို့တင့်ကားကို flash version ကို
တိုက်ခိုက်မှုမှသင်၏မြို့ခုခံကာကွယ်ဖို့အကြံပေးအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်။ flash ကိုဗားရှင်း၏ဤဂန္တင့်ကားဂိမ်း။ ပျော်ရွှင်စွာခံစားပါ!
ရဲ့သငျသညျအဘယျပူပြင်းတဲ့ရိုက်ချက်လက်ဖြောင့်ကိုမြင်ရပါစေ! သင့်ရဲ့လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်ဖမ်းပြီး & သူတို့အားပစ်မှတ်ထိမှန်။ ရိုက်ကူးဖို့ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် mouse ရန်, R ကိုချဲ့ရန် SPACE ကိုသုံးပါ။
Dora Diego ကယ်ဆယ်ရေး
ဒီယေဂိုသစ်တောမိကျောင်းဖမ်းမိခဲ့သည်။ အသီးအသီးမိကျောင်းသတ်ရမှတ်ရပြီးနောက်ရဲ့အပေါငျးတို့သပစ္စည်းများစုဆောင်းကြကုန်အံ့, လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှမိကျောင်းဖျက်ဆီးသဖြင့်ဒိုရာ Diego မှကယ်ဆယ်ရေးကိုကူညီပါ။